Eyona njongo yeMpumelelo ekuPhunyezweni kweZisombululo zabaSebenzi aBodwa (A10004) | Izisombululo ze-OMG
IQhosha lokuPhuthuma kwiPhulo likaXakeka oluPhezulu, iKhamera yeWorn Went body, umkhondo we-GPS kunye neBed Exit Alarm, uMfihli weKhamera efihliweyo-Ikhaya kunye neSibhedlele
Whatsapp: Singapore + 658333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Inqanaba 7, S408933 - Vula: Mon-Sat: 10 am-6pm)
I-SPY Audio Recorder
IQumrhu Eliqhotyoshelweyo leKhamera Landa
Ingozi yokuXakeka kwabaNtu abaDala / uThintelo lokuwa
Ikhamera ye-SPY efihliweyo / irekhoda yezwi
Eyona njongo yeMpumelelo yoPhumezo lweSisombululo soMsebenzi waBodwa (A10004)
Izisombululo zabasebenzi ezizodwa ziindlela ezisetyenziswayo ukukhawulelana nemingcipheko abanokujongana nayo abasebenzi bodwa xa besenza imisebenzi yabo. Kuyaziwa ukuba abasebenzi bebodwa banomdla wokwenzakala kwaye baneengozi ezisongela ubomi, kodwa kubalulekile ukuba uvavanyo olufanelekileyo lomngcipheko lwenziwe ukuze umqeshi akwazi ukuba kwenzeke ntoni. Ngolu lwazi lokubonakala kwento enokwenzeka, kunokwenzeka ukuba wenze izisombululo kule mingcipheko. Esi sisisombululo esisodwa sabasebenzi. Kusisenzo sokujonga ukhuseleko lwabasebenzi abachaphazeleka kwimingcipheko emininzi, oku kungenxa yeemeko zomsebenzi weendawo abahlala kuzo kunye nento yokuba basebenza bodwa bebodwa. Kwimeko apho kukho imeko kaxakeka, akukho mntu uya kubiza okanye akukho mntu unokufumana uncedo. Kukho iindlela ezininzi zesisombululo esinye sabasebenzi esisetyenziswa ziinkampani kunye nombutho kwihlabathi liphela. Ezinye zezi ndlela zezi:
Isixhobo sokubeka iliso kukhuseleko: ngoncedo lwezixhobo zokubeka iliso ezisetyenziselwe ukujonga iimeko zasekhaya njenge: irhasi eyingozi, ukusebenza kwenyikima okanye ubuchwephesha bendawo. Itekhnoloji esekwe kwi-smartphone iyakwazi ukuziphendulela kuyo yonke le nto ikhuthaza ukhuseleko lwabantu oluza kusebenza kwindawo enjalo. Izixhobo azikenziwa njengoko zinokuthintela umsebenzi; zihlala zithwelwe okanye zinxitywe kwisitiya sokhuseleko sabasebenzi njengenxalenye yokunxiba, zinokuqhotyoshelwa nakwibheji yesazisi okanye isiqwenga sezixhobo ezibalulekileyo.
Ngezi zixhobo, unokuxela kwangaphambili ingozi ezayo
Banokuphinda kabini njengabalandeli ukufumana umsebenzi
Ukuba ikhutshiwe ngekhe ikwazi ukwenza umsebenzi wayo
Kwiimeko ezininzi, le nkqubo iyasilela ekubekweni kweliso kunye noqeqesho olufanelekileyo olubaluleke kakhulu kwimpumelelo yalo. Izinga lokuphumelela aliphezulu kangako kuba akukwazeki ngokupheleleyo ukwazi ukuba abasebenzi bayasebenza okanye bayabona nje njengejunks kwaye bayeke ngaphambi kokuqalisa komsebenzi. Ukuqinisekisa ukuba iyasetyenziswa, uqeqesho oluchanekileyo kufuneka lunikwe umsebenzi ukuze babanike ulwazi lokuba kubaluleke kangakanani ukuba basebenzise izixhobo zokubeka iliso ngaphambi kokuba baqale umsebenzi. Inkampani kufuneka izame ukuthenga isixhobo esingasasebenziyo kwaye sincinci ngokudibanisa ne- "1, 2, 3 amanyathelo" ukuba asetyenziswe.
Inkqubo kaBuddy: abasebenzi banokubhanqwa ngababini ukuqinisekisa ukhuseleko lomnye wabo luphathwa ngomnye kwimeko yengozi. Le nkqubo iquka ukubeka abasebenzi kunye ukuze baqiniseke ukuba "bagcina umzalwana" ngale ndlela ukhuseleko lomnye luba luxanduva lomnye. Yindlela esebenzayo encomekayo njengemisebenzi ethile apho amaza omoya kunye namaza e-EM angavumeli kunxibelelwano, inkqubo yomhlobo inokuqinisekisa ukuba kwimeko yongxamiseko omnye usebenzisa uncedo lokuqala kolunye.
Ukuxela isigameko kuyenzeka ngokukhawuleza ngenkqubo enjalo
Umsebenzi omnye uphatha omnye nakweyiphi na imeko yengozi
Ingozi inokubandakanya bobabini abasebenzi benze ukuba inkqubo ye-buddy ingasebenzi
Inkqubo yomhlobo ifezekile ngendlela engavakaliyo, iyasilela ekuqwalaselweni kwento yokuba isiganeko singenzeka kwaye sibabeke bobabini abasebenzi ngendlela eyonakeleyo eyenza ukuba kungabikho kunxibelelwano. Amathuba ale ndlela yokuphumelela aphumelele malunga nesiqingatha, kwiimeko ezininzi, izinto zinokuhamba zichaphazela abasebenzi bobabini. Kuya kuba kuhle ukuba uqiniseke ukuba abasebenzi bobabini baxhotyisiwe ngezixhobo ezinokuthumela iingxelo kwinkampani ukuba bobabini baphantsi ngaxeshanye. Iindlela ezisekwe kwitekhnoloji ngoku zikhetha ngaphezu kweendlela zesikhokelo ezifana nenkqubo yehlobo
Inkqubo esekwe kwifowuni yokungenale yinkqubo enikwa ixesha apho umsebenzi kufuneka abize kwaye enze ingxelo ngemeko yomsebenzi. Ukuba neli thuba lokuphumla rhoqo kunceda umbutho wazi ukuba umsebenzi wabo ulungile kwaye umsebenzi uqhubeka kakuhle. Olu hlobo lomnxeba luhlala lwenziwa ngeyure okanye ngeyure nganye. Zimbini iindlela zokusetyenziswa kwezi ziphelo:
Iziko leminxeba eliqhutywa: oku kuthetha ukuba unokufowunela kuphela ngeenqwelomoya eziphathwayo usebenzisa uluhlu lwamaxabiso
Ukujonga okwenziwe ngokuzenzekelayo okwenziwe ngamafu: oku kunokuqesha isoftware njengemodeli yenkonzo, oku kusebenzisa idatha ngokusebenzisa isoftware ethile ukuqhagamshela omabini amaqela kunxibelelwano lwe-Intanethi.
Ngeyure / kabini ngeveki ungafumana ingxelo yemeko kubasebenzi
Kuya kuba lula ukwazi ukuba kukho into engalunganga
Ukutsala umnxeba ngerhafu kunokubiza kakhulu ingakumbi xa kungenanto yokuthetha
Emva komnxeba, ingozi inokuvela kwaye ukuba ngomnxeba olandelayo ifunyenwe inokuba ilibele kakhulu ukunika uncedo.
Indlela yokujonga-esekwe kwifowuni ifuna umntu okwimpilo entle ukuba athathe ixesha lakhe kwaye afowunele ezi ndlela zinokungathembakali njengoko umsebenzi esenokuthoba ezantsi kwaye abaleke. Ukunyusa amazinga ayo okuphumelela kungasetyenziselwa ngeenzwa kunye nee-trackers ezithumela iialamu kwimeko yengozi. Le ndlela kufuneka isetyenziswe nezinye izixhobo kwaye ayixhomekekanga kwaphela
Ukuhlolwa kwesicelo se-smartphone: ngee-smartphones ezikhoyo kwiimfuno kunye netekhnoloji ye-smartphone eqhubekayo evelisa, uphuhliso lwesicelo esivumela abasebenzi ukuba bacele uncedo ngoku kunokwenzeka. Ngopapasho kunye neempompo zamaqhosha athile, umsebenzi unokufumana uncedo oluza ngokukhawuleza kuyo nayiphi na indawo efunekayo esebenzisa itekhnoloji ye-GPS ezi nkqubo zinokuzisebenzisa ukulandela umkhondo. Ezi zixhobo ngamanye amaxesha zinokuba neqhosha lokukhathazeka okanye zivumele ukungena ngokukhawuleza ngaphandle kokufuna iifowuni. Ezinye iinkqubo ze-smartphone zivumela i-trigger engenazandla kunye, oku kunokubandakanya ukukhupha i-tether kwi-jackphone yentloko. Le ndlela abasebenzi bebodwa banakho ukusayina ngokukhawuleza ukuba bafuna uncedo ngaphandle kokuvula iifowuni zabo.
Kulula ukuyisebenzisa kwaye unike ingxelo ngayo
Ngezinhlelo zokusebenza, unokubeka esweni abasebenzi bakho ngexesha langempela
Ukuseta kufuna ingcali yezobugcisa ukuze uyile
Iiapps ezenziwayo zihlala zibiza kakhulu ukuseta kunye nokwakha
Ifuna ukufikelela kwi-intanethi, kunokuba nzima ukuchaza apho kungekho intanethi.
Ezi ndlela zifuna uqhagamshelo olulungileyo lwe-intanethi ukunxibelelana ngokuzinzileyo kuba yinkqubo eyakhelwe ujikeleze itekhnoloji kwaye izenzekelayo phakathi kweendlela eziphumelelayo ezisetyenziswayo. Unxibelelwano lwe-Intanethi lunokuthi luchaphazele izinga lokuphumelela kwalo njengoko kufuneka i-intanethi ithumele iingxelo kwaye zibangele ii-alamu ze-SOS. Indlela ye-smartphone ibaluleke kakhulu kwaye irekhode ii-upvotes ezininzi kumava omsebenzisi.
Ukuphumeza isisombululo somsebenzi esisodwa kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukhuseleko lwabasebenzi, kodwa ngaphaya kokukhetha indlela kunokuba ngcono ukufaka ngelixa kujongwa amazinga okuphumelela ezisombululo.
3541 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-5 Namhlanje
I-OMG Solutions Batam I-Ofisi @ Harborbay Ferry Isiphelo
I-OMG Solutions ithenge iyunithi yeofisi eBatam. Ukusekwa kwethu kwiQela le-R & D kwiBatam kukubonelela ngokwenziwa kwezinto ezintsha ukuze sikwazi ukunceda abathengi bethu abatsha kunye nabakhoyo ngcono.
Ndwendwela iOfisi yethu eBatam @ Harborbay Ferry Isiphelo
Izixazululo ze-OMG-iThunyelwe eSwitzerland 500 Enterprise 2018 / 2019
Malunga nezisombululo ze-OMG
Izixazululo ze-OMG zisebenza kuluhlu olubanzi lokulandela umkhondo, ukurekhoda kunye netekhnoloji yealam. Sinikezela ngezisombululo zangoku kwiingxaki zemihla ngemihla, njengeendlela zokuthintela ukuwa, iialamu zokhuseleko, ukurekhoda okude kunye nezinye ezininzi. I-OMG Solutions yanikwa i-Singapore 500 Enterprise ngo-2018 nango-2019. Kodwa ishishini lethu landise ngaphaya kwesixeko, laya kwamanye amazwe anjengeIndonesia. Ngolwazi oluthe kratya, tyelelo lwethu Ngathi phepha.
I-copyright 2011, OMG Consulting Pte Ltd Iphuhliswe ngu	IMG Solutions Pte Ltd